कर्णाली प्रदेशमा पानी : उपयोग, समस्या र तयारी - SatyaPatrika
कर्णाली प्रदेशमा पानी : उपयोग, समस्या र तयारी
पृथ्वीमा जीवन सम्भव हुनुमा पानीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । सम्पूर्ण जीवित वनस्पति र प्राणिहरुको कूल पिण्डको आधा भन्दा धेरै भाग पानीले ढाकेको हुन्छ । मानिसको दैनिक जीवनयापन र स्वास्थ्यसंग पानीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ । त्यसैले सुरक्षित खानेपानीको उपलब्धतालाई मानव विकासको प्रमुख आधार मान्ने गरिन्छ । कृषि, पशुपालन, उर्जा विकास, यातायात , औद्योगीकरण र पर्यटन जस्ता कार्यहरु पानीमा नै आधारित भएकोले पानीलाई आर्थिक–सामाजिक विकासको आवस्यकता मान्ने गरिन्छ ।
पृथ्वीको ७२ प्रतिशत भन्दा धेरै भाग पानीले ढाकेको भएपनि पानीको उपलब्धता सहज भएको देखिदैन । पृथ्वीको कूल पानी भण्डार मध्ये ९७ प्रतिशत नुनिलो पानी रहेको छ र ३ प्रतिशत मात्र ताजा पानी रहेको छ । विस्व जल आयोगका अनुसार कूल ताजा पानीको करिव एक प्रतिशत मात्र मानिसको पहुचमा रहेको छ । पछिल्लो सय वर्र्षमा विस्वको २० प्रतिशत ताजा पानीका श्रोतहरु हराएका छन भने भूमिगत पानीको दोहन हरेक वर्र्ष २ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ । कृषि तथा खाद्य संगठनका अनुसार विस्वको कूल ताजापानी खपतको ७० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा भैरहेको छ भने औद्योगिक र घरेलु क्षेत्रले क्रमशः २० र १० प्रतिशत पानी खपत गरिरहेका छन । सन् २०५० सम्ममा पानीको मागमा ५५ प्रतिशतले वृ्द्धी हुने अनुमान गरिएको छ ।
कर्णालीमा पानीले ओगटेको भू–भाग ०.१८५ प्रतिशत र हिम क्षेत्र २६.५ प्रतिशत रहेकोछ । कर्णाली प्रदेशलाई यहाका तालतलैया र नदि नालाहरुले पहिचान दिलाएका छन् । कर्णाली प्रदेशको नाम कर्णाली नदी रहेको छ । नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली ५०७ कि.मि. लम्बाइ छ । कर्णाली नदीको जलप्रवाहित क्षेत्र ४५,२५९ वर्ग कि.मि. रहेको छ । कर्णालीका शाखाहरूमा भेरी, मुगु कर्णाली, तिला, लोदी, दोजाम, सेती, बबई, राप्तीलगायतका नदीहरू पर्दछन् । कर्णाली नदी प्रणालीबाट यस प्रदेशका उपत्यका र बेँसीहरू सिञ्चित भएका छन् । यस प्रदेशमा अन्य महत्वपूर्ण र शाखा नदीनालामा लिमी खोला, हेप्का खोला, रिपगाड, सर्केगाड, गल्वागाड, खत्याड खोला, फुगाड, लोहरे, छामघाट, रामघाट, गडाज्युला खोला, पराजुली खोला, कट्टी खोला, नलसिंङ गाड, शारदा, चिङघाट, तामे, बोज्यान खोला, लाहुखोला, सिवान खोला आदि रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश मुख्य सम्पदा यहाँका तालहरू हुन् । नेपालको सबैभन्दा सुन्दर र ठुलो रारा दह यस प्रदेशमा पर्दछ भने सबैभन्दा गहिरो र प्राकृतिक विचित्रताले भरिपूर्ण फोक्सुन्डो ताल पनि यही प्रदेशमा पर्दछ । यस बाहेक कर्णाली प्रदेशमा सल्यानको कुपिण्डे दह, हुम्लाका दुधे दहहरू, जुम्लाको शंख र गिड्डि दह, रुकुमको स्यार्पु दह, सुर्खेतको बराह ताल, जाजुरा दह र बुलबुले ताल पनि यही प्रदेशमा पर्दछन्। कर्णालीमा नेपालको सबैभन्दा ठुलोताल रारा र गहिरो ताल फोक्सुन्डो मात्र होइन, सयौँ तालहरूको क्षेत्र हो । कर्णाली प्रदेश प्रोफाईलका अनुसार यहाँ ९३६ तालहरू छन् । यि मध्ये ४२९ तालहरू ५ हजार मिटरभन्दा माथि रहेका छन् भने ३,००० मिटरदेखि ४,९९९ मिटरको उचाइमा ४३२ वटा तालहरू रहेका छन् तर १०० देखि २,९९९ मिटरसम्मको उचाइमा रहेका तालहरूको सङ्ख्या भने ६५ मात्र रहेको छ । तालहरूको जिल्लागत वितरण हेर्दा सबैभन्दा बढी ३८१ तालहरू हुम्ला जिल्लामा रहेका छन् भने कालिकोट जिल्लामा एउटा मात्र ताल छ । कर्णाली प्रदेशमा २६ प्रतिशत हिमक्षेत्र रहेको र कुल १,४५९ हिमनदीहरूले १,०२३ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल ओगटेका छन् । त्यस्तै हिमतालको सङ्ख्या ७४२ रहेको छ र यी हिम तालहरूले हिमक्षेत्रको कुल २९.१४ प्रतिशत भूभाग ओगट्दछन् ।
कर्णाली प्रदेशका नदीहरुमा अपार सम्भावना भएपनि त्यसको उपयोग गर्न सकिएको छैन । प्रदेशका नदिनालाहरुबाट २२ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको भनिएपनि अहिले प्रदेशभित्र ८ दशमलव २५ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भैरहेको छ । जलश्रोतको ठुलो भण्डारमै धेरै नागरिकहरु विजुलीविहीन भएर बस्नुपर्ने र प्रयोगमा आएको विजुलीको ठुलो हिस्सा पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने कुरा पक्कैपनि चिन्ताको विषय हो । कर्णाली प्रदेशको आवधिक योजनामा उल्लेख भए अनुसार यस प्रदेशको कूल खेतीयोग्य जमिन मध्ये १५ दशमलब ५ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिचाई सुविधा उपलब्ध छ । सिचाइको कमीले गर्दा खाद्यान्न उत्पादनमा कमि आएकोले कर्णाली प्रदेशमा हरेक वर्ष खाद्यान्न अभाव दोहोरिने गरेको छ ।
तुलनात्मक हिसाबले विकासमा पछाडी परेको भनि चर्चा चल्ने गरेको भएपनि कर्णाली प्रदेश आधारभूत स्तरको खानेपानी प्रणालीको पहुँचको हिसावले अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै पछाडी भने रहेको देखिंदैन । राष्ट्रिय औसत भन्दा केही कम रहे पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा यहाँको कभरेज धेरै पछाडी भने रहेको छैन । खानेपानी मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार समग्रमा ८४.१८% घरधुरीहरुमा खानेपानी प्रणाली पुगेको यस प्रदेशमा पाइप प्रणालीको खानेपानी सेवा उपयोग गर्ने घरधुरीको संख्या ८०.९% रहेको छ । नेपालका सात प्रदेश मध्ये सवै भन्दा धेरै प्रतिशत घरहरुले पाइप प्रणालीको खानेपानी उपभोग गर्नेमा गण्डकी पछि यो प्रदेश आउँछ । पाईप प्रणालीको खानेपानी पछि यस प्रदेशमा सुरक्षित मुहान तथा ईनार को पानी प्रयोग गर्नेको हिस्सा आउँछ । कुल सेवा मध्ये करिव २.५१% हिस्सा सुरक्षित मुहान तथा ईनारहरुको आउँछ । ट्युववेलको पानी प्रयोग गर्ने र आकाशे पानी संकलन गर्नेको प्रतिशत क्रमश ०.६५% र ०.१३% रहेको छ । सन २०१० मा समग्र प्रदेश मध्ये केवल ७०.५१% ले मात्र खानेपानी सेवा पाइरहेकोमा हाल यो प्रतिशत वढेर ८४.१८% पुगेको छ । यसरी प्रदेशको मात्र तुलनात्मक अध्ययन गर्दा आधारभूत खानेंपानी सेवाको क्षेत्रमा प्रदेशले राम्रै प्रगति गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय वृद्धि दर वार्षिक औसत करिव १% मात्र रहेकोमा यो प्रदेशको वृद्धिदर वार्षिक करिव २% रहेको देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीमा पहुँचको वृद्धिदर उत्साहजनक भएपनि अझै पनि करिव ५० हजार घरधुरीहरुमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउनु बाँकि देखिन्छ । प्रदेशमा अहिलेकै खानेपानी उपलब्धतालाई निरन्तरता दिन र थप सुविधा वृद्धि गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ । रुकुम, सल्यान, दैले।ख, डोल्पा,कालिकोट, हुम्लामा पहुँचयोग्य पानीका श्रोतहरु कम भएकोले सिचाई र खानेपानीमा धेरै समस्या छ । अहिलेपनि कर्णाली प्रदेशका हिमाली र पहाडी क्षेत्रका धेरै परिवारले खानेपानीको लागी ठुलो सास्ती खेप्नु परेको छ । यी क्षेत्रमा खानेपानीका मूलहरु र वस्ती बिचको दूरी धेरै हुने र वस्तीहरु छरिएर रहेको कारणले गर्दा यहाँका प्रत्येक बस्ती र घरसम्म खानेपानी पु¥याउने कार्य निकै चुनौतिपूणर््ा रहदै आएको छ । खानेपानीको व्यवस्था गर्न नसकेकै कारणले गर्दा पहाडी क्षेत्र का कतिपय बस्तीबाट मानिसहरु बसाई सरेर अन्यत्र लागेको पीडादायी खबरहरु समेत बेलाबेलामा सुनिने गरेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा खानेपानी उपलब्धतामा मात्र नभएर गुणस्तरमा पनि ठुलो समस्या रहेको छ । यहाका अधिकांश खानेपानीका श्रोतहरु खुला छन् र यस्ता श्रोत जैविक र रासायनिक प्रदुषणको जोखिममा छन् । पहाडी क्षेत्रका वासिन्दाले यस्ता श्रोतको पानी प्रशोधन नगरि सोझै प्रयोग गरिरहेका छन् । जसले गर्दा खानेपानी उपभोक्ताहरु बेलाबेलामा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेको देखिन्छ । अनियन्त्रित ढंगले सडक निर्माण र वन विनासले गर्दा सिमित संख्यामा रहेका पानीका श्रोतहरु सुक्दै गएका छन् यसले गर्दा खानेपानी उपलब्धता घट्दै गएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको तयारी
पानी जीवन र विकासको मुख्य आधार हो । सुरक्षित र पर्याप्त पानी विना स्वस्थ जीवन र समुन्नत समाजको कल्पना गर्न सकिदैन । यहि कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले सिचाईमा नया प्रविधिको प्रयोग तथा सिचाई प्रणालीको दिगो व्यवस्थापनको प्रयोग गरि योजनाको अन्त्यसम्ममा ४० प्रतिशत भूभागमा वर्षेभरि सिचाई सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी योजनाको अन्त्यसम्ममा ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूत खानेपानीको सुविधा पु¥याउने र सुधारिएको सरसफाइ सुविधा प्राप्त गर्ने परिवार ८५ प्रतिशत लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि “एक घर एक धारा नीतिलाई कार्वान्वयन गर्दै सवै गाउँ–सहर तथा बस्तीमा सघ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी आधारभूत खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइने, खानेपानी सेवा विस्तारका लागि नयाँ प्रविधि हरू (वर्षा संकलन, लिफ्टिङ्ग, पहाड़ी भूमिगत बोरिङ्ग) को उपयोग गर्दै मुहानहरूको संरक्षण र सुरक्षित पानीको व्यवस्था गरिने, सञ्चालित आयोजनाहरू दिगो र भरपर्दो बनाउन उचित मर्मत सम्भारको लागि उपभोक्ताहरूलाई सक्षम बनाइने र मौजुदा खानेपानी सेवालाई स्तर बृध्दि गरी क्रमिक रुपमा मध्यम तथा उच्च स्तरको बनाउदै लैजानको लागि खानेपानीका योजनालाई आयोजनाको अभिन्न अङ्गको रुपमा सुरक्षा लिई खानेपानी गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने तथा ठूला तथा सहरी खानेपानी आयोजनाहरूमा पानी प्रशोधन प्रणालीको निर्माण रणनीति निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले अहिलेकै भौतिक अवस्था र एकल प्रयासले यी लक्ष्यहरु हासिल गर्न सक्ने देखिदैन। संघीय सरकार र छिमेकी प्रदेशहरुसंगको समन्वयमा एकीकृत वस्ती निर्माण, दुर्गमका वस्तिहरुको हस्तान्तरण तथा जल योजनाहरुको एकीकरण गर्न सकेमा मात्र प्रदेशमा सिचाई र खानेपानीका लक्ष्यहरु हासिल हुन् सक्नेछन.
पर्यटन शहरीकरण, उर्जा विकास, कृषि र लैंगिक उत्थान जस्ता विषयवस्तुहरु पानी संगै जोडिएर आउने भएकोले पानीको चर्चालाई खानेपानी र सिंचाइमा मात्र सिमित गर्न मिल्दैन । अब पानीको प्रयोग र व्यवस्थापनलाई दिगो विकाससंग जोडेर हेर्नु आवस्यक भैसकेको छ । पानीका श्रोतहरुको संरक्षण र विवेकपूर्ण प्रयोगले मात्र हाम्रा आवस्यकताहरु पुरा गर्न सकिन्छ । पानीलाई समृ्द्धिको आधार बनाउनको लागि समयमै यसको संरक्षण र व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरि सबै क्षेत्रले लगानी बढाउनु जरुर्री छ । अन्यथा राजनैतिक र आर्थिक अधिकार प्राप्तिकोलागी अहिलेसम्म संघर्षहरु हुदै आएकोमा भविस्यमा पानीको लागि संघर्ष हुने र त्यो संघर्ष सत्ता र समाजको लागि निकै महँगो पर्नेछ ।
बिजुलीमा खाना पकाउँदा सस्तो,विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन भने चुनौती
के तपाइँ बालबालिकालाइ मेकअप गरी टिकटक बनाउने बानी त पर्नुभएको छैन ? त्यसो भए त्यो बानी हटाउनु राम्रो हुनेछ